Ny hetsi-panoherana "Yellow Vests" any Frantsa dia mikasika ny Nosy La Réunion ao La Réunion
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Ny hetsi-panoherana "Vest Yellow" ao Frantsa dia mikasika ny Nosy La Réunion ao La Réunion
Ny hetsi-panoherana "Vest Yellow" ao Frantsa dia mikasika ny Nosy La Réunion ao La Réunion
Andriamatoa Didier Robert, filohan'ny Réunion, tamin'ny herinandro lasa teo dia niresaka tamin'ny mponin'ny nosy tamin'ny alàlan'ny fanambarana miely amin'ny fomba rehetra azo alaina amin'ny fiverenana amin'ny ara-dalàna.
Ny filoha Robert avy amin'ny Filan-kevi-paritry ny Réunion dia nilaza hoe:
Miaraha miasa hiverenana tsikelikely amin'ny fiainana ara-dalàna, ho an'ny fianakaviana, ny mpiasa, ny orinasa…
Amin'ny andro faha-11 amin'ireo hetsika natomboky ny Yellow Vests, ny toekarenan'i La Réunion dia nijaly noho ny famelezan'ny paralysisa ny ambaratonga mbola tsy nisy toa azy, miaraka amin'ny fiatraikany mavesatra be, izay norefesin'ny tsirairay tamin'ny fombany avy, ary amin'izany tokony hiaraha-mitondra isika vahaolana.
Ny fiverenana haingana amin'ny "normality" dia tsy maintsy hita. Ilaina amin'ny fifampiresahana sy fifampiraharahana. Ny fivoriana voalohany dia natomboka tamin'ny Prefet tamin'ny fangatahan'ireo Vest Yellow izay efa hatrany am-piandohana dia naneho ny faniriany tsy hampifandray ny politika, ny sendika na ny solontena ara-pinoana ary hikarakara ny fifampiraharahana manaraka miaraka amin'ny minisitry ny faritany ivelany any ivelany.
Ho ahy, nandritra ny 11 andro dia niara-niasa tamin'ireo mpanolo-tsaina isam-paritra aho, mifandraika amin'ireo mpisehatra amin'ny sehatry ny fiofanana arak'asa, ny tontolon'ny fiaraha-miasa, mpilalao ara-toekarena ao anatin'ny toe-tsaina mitovy amin'ny fananganana sy fitadiavana vahaolana. Ny Faritra Réunion dia handray ny andraikiny feno, tahaka ny fanaonay hatrizay, amin'ny toe-javatra rehetra sy amin'ny raharaha rehetra izay tafiditra ao anatin'ny fahaizany mivantana ary izay, zaraina amin'ny Fanjakana sy ny tompon'andraikitra eo an-toerana hafa.
Izaho manokana, amin'ny maha-mpanao politika ahy, dia niasa tamim-pitandremana ny tombotsoan'ny tombontsoan'ny besinimaro sy ny fanajana ny lalàna: manohana ireo orinasa mampiasa vola sy mpanohana amin'ny asa aman-draharaha sy ny asa; ary manohana politika iray ihany koa hahazoana tombontsoa mitovy.
Saingy ny fihetsika nataoko dia tsy nanampy tamin'ny famoahana ny fahorian'ny Reunion rehetra. Manaiky izany amin'ny fanetren-tena rehetra aho. Saingy androany dia tsy maintsy ho fantatry ny rehetra ihany koa ny fomba tokony hihetsika amin'ny ambaratonga andraikiny.
Mandritra izany fotoana izany, isika rehetra dia tokony ho vonona hifampiresaka sy handrafitra ny fanarenana.
Ho an'ny nosintsika, ny valiny dia tsy maintsy ho matanjaka amin'ny olana roa tonta momba ny asa sy ny fahefa-mividy. Ny valiny dia tsy maintsy ihodivirana amin'ny fomba vaovao, maodely vaovao angatahina sy hatsangana. Modely iray izay mihevitra an'io fitenenana malaza Reunionais io. Modely iray izay mihevitra ny lesoka tamin'ny lasa. Modely iray izay mamelona ny tanjaky ny faritaninay, ny kalitao sy ny hetahetan'ny vehivavy sy ny lehilahy rehetra manao ny Nosy La Réunion.
Ny hetsika voalohany sy ny fanapahan-kevitra voalohany:
Raisiko ny fandraisana andraikitra voalohany nataon'i Annick GIRARDIN, Minisitry ny Teritori any ivelany, amin'ny anaran'ny Fanjakana, tamin'ny fanambarana sy ny fampiharana ny fihenan'ny vidin-tsolika, nanomboka tamin'ity maraina ity tamin'ny alàlan'ny Order of the Prefet.
Mikasika ny anjara andraikitr'ity faritra ity dia nambarako tamin'ny herinandro lasa ny fihenan'ny fiakaran'ny hetra solika mandritra ny telo taona ho avy; haba izay nifidianako ny ankamaroan'ireo voafidy tao amin'ny Antenimiera plenary satria mino koa aho fa ilaina ny mamaly ny maika ny tetezamita angovo.
Notondroiko fa ho fampiharana ny fepetra vaovao momba ny fanamoriana dia mazava ho azy fa ho raisinay ny fiverenana amin'ny tarif 2017 hamafana ny fiakaran'ny hetra amin'ny solika ho an'ny Réunion rehetra.
Ampahatsiahiviko anao ihany koa fa ho an'ny Faritra, ity haba ity dia natokana ho an'ny famatsiam-bola amin'ny fikojakojana sy fanavaozana ny tamba-jotra manerana ny nosy.
Tiako ny mampatsiahy anao fa ny vola azo avy amin'ity hetra solika ity dia zaraina amin'ireo manampahefana eo an-toerana: Faritra 117 tapitrisa, Kaomina 55.7 tapitrisa, Sampana 42.9 tapitrisa, EPCI 5.4 tapitrisa. (isa 201).
FIANAKAVIANA, MPIASA, MPIASA ASA
Te-hiteny anio aho ireo rehetra izay manahy ny amin'ny post-crisis, izay manahy ny amin'ny fomba fanarenana ny La Réunion sy ny toekarentsika.
Nandany andro vitsivitsy nifanakalo hevitra aho, nihaino, nihaona ary nizara tamin'ireo mpanao asa tanana, mpivarotra kely, mpikambana amin'ny asa malala-tanana, taxi, fiara mpamonjy voina, mpitsabo aretin-tsaina, mpitsabo mpanampy, tantsaha, mpiantsehatra ara-kolontsaina, miaraka amin'ireo solontenan'ny fikambanana matihanina lehibe, miaraka amin'ireo reny sy raim-pianakaviana, mpiasa ary mpiasa amin'ny sehatra tsy miankina sy tsy miankina… Nifanakalo tamin'ity krizy manan-tantara ity ho an'ny nosintsika izahay, tamin'ny vokadratsin'ny malemy ny toekarentsika nandritra ny 10 andro sy ireo fitaovana azo natokana ho an'ny fanarenana. Ny vesatra dia efa mavesatra, ary ny tarehimarika dia hampitaina haingana amin'ny minisitry ny faritany any ivelany. Manokana, misy ny tolo-kevitra natolotry ny orinasa kely hamonjy ny fitaovan'izy ireo sy ny asany izay tsy maintsy hodinihina haingana.
Te hanome toky an'ireo mpisehatra ara-toekarena aho, ireo mpandraharaha madinidinika sy tena madinidinika, ireo hery velona eto amin'ny faritaninay, ireo mpitarika mpiara-miasa… Tiako holazaina amin'izy ireo fa eo an-tanan'izy ireo ny fanentanana antsika tanteraka. Tsy maintsy hiatrika isika, miaraka amin'ny Fanjakana mazava ho azy, miaraka amin'ireo manampahefana eo an-toerana, miaraka amin'ireo rehetra izay te-hanetsika, amin'ity ezaka ilaina ity izay tsy maintsy miavaka sy eo noho eo.
HO AN'NY MINISITRA HO AN'NY FARITAN'NY TANINDRAZANA
Ary farany, ity fanendrena voatondro miaraka amin'ny minisitry ny faritany any ivelany ity manomboka amin'ny Alarobia dia tokony ho fotoana iray hametrahana eo ambony latabatra indray ireo lohahevitra vonjy maika, fa koa ny fanehoana ny fitakiana rehetra izay ho henontsika rehetra amin'izao andro farany izao, amin'ny lohahevitra rehetra:
- asa maharitra; asa tohana
- Fisotroan-dronono madinidinika
- Ny fanombanana ny karama ambany
- Monopolie sy ny famolavolana ny vidiny, ny haba amin'ny orinasa sy ny isam-batan'olona
- Fanafahana ny fandaniana amin'ny orinasa sy ny fanafoanana ny trosa ara-tsosialy sy ara-bola
Ny fepetra hatolotra dia tsy maintsy mifanaraka amin'ny fanantenana sy fanamby ho an'ny nosintsika. Amin'ny farany, ireo Reunionais no tsy maintsy misafidy ny ho aviny.
Seranam-piaramanidina Iraisam-pirenena Hamad, Qatar Airways ary QDF hampiantrano ny Trinity Forum 2019
Manoloana ny loza mety hitranga amin'ny fizahantany